नेदरल्याण्ड्समा सिर्जना नामक कविता, गित तथा गजल संग्रह विमोचित हुने भएको छ । आगामी १९ अप्रिल १२ बजे Jan van Galenstraat 24 1051 KM Amsterdam मा नेपाल सरकारका सुचना तथा संचार मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालद्धारा विमोचन हुने भएको हो । लामो समय नेदरल्याण्ड्समा बसोबास गर्दै आइरहेका स्थानिय समाजसेवी तथा गैर आवासीय नेपाली संघ..
बुझ्यौ होला बिछोडमा चोट कति हुन्छ ?
सोमवार, चैत्र ३०, २०७१ मा प्रकाशित
गजल ।।।।।।। बुझ्यौ होला बिछोडमा चोट कति हुन्छ ? खप्यौ होला बदनामी खोट कति हुन्छ !|| एउटा फूल झरे पनी बोट कति हुन्छ ? दोबाटोमा छुटेपछी रोट कति हुन्छ || तिमि बाटै सिकें मैलै झुट कति हुन्छ ? बुझ्यौ आज पिरतीमा छुट कति हुन्छ ? झुक्याउने र फसाउने रुट कति हुन्छ बुझ्यौआज बिछोडमा चोटकति हुन्छ ?? भरत..
अमर राईको एल्बोम “इमोर्टल” चाडै बजारमा।
आइतवार, चैत्र ८, २०७१ मा प्रकाशित
प्रदिप राई , कोलालम्पुर मलेसिया । गायक अमर राई प्रवासमा रहेर पनि गीतसंगीतको क्षेत्रमा कुनै नयाँ नौलो नाम हैन। गायक बन्ने सपनालाई प्रवासमै गीत रेकर्ड गरेर पूरा गर्ने योजना अब चाडै पुरा हुने भएका छन। अमर राई मलेसियाको एक कम्पनीमा कार्यरत राईले मलेसियाकै एक रेकर्डिङ स्टुडियोमा गीत रेकर्ड गराइरहेका..